C/raxmaan C/shakuur oo la horgeeyay Maxkamadda Gobalka Banaadir+Xog Xasaasiya. – Hornafrik Media Network
Siyaasiga C/raxmaan C/shakuur ayaa la horgeeyay Xafiiska Xeer Illaaliyaha Guud, halkaas oo imminka looga samaynayo Xabsi Xalaalayn ay dalbatay Nabadsugidda Somalia.
Sida uu qabo Sharcigu Maxbuus laguma hayn karo Xabsi muddo ka badan 24 Saac, iyadoo aan la horgayn Maxkamad, Waxaana 24-ka saac ee Sharcigu oggolaanayay ay ku ekayd Xalay Saq dhexe, taasoo ka dhigan inuu xirnaa wax ka badan 12 Saacadood si Sharci Darro ah. Waxaana hadda la gudbinayay Qoraal lagu dalbanayo in Xabsi Xalaalayn loo sameeyo.
Maxkamadaha Dalka oo aan ahayn kuwa awood u leh inay gaaraan Go’aano ka madax banaan siday rabaan Madaxda Dowladdu waxay oggolaadeen Xabsi Xalaalaynta ay Dalbadeen Sirdoonka Somalia.
Sida uu qabo Xeerku waxa bixin kara Xabsi Xalaalayn Garsoore, balse hadda Xafiiska Xeer Illaalinta ayaa bixiyay Xabsi Xalaalaynta C/raxmaan C/shakuur oo hadda la geeyay Maxkamadda Gobalka Banaadir oo ay ku dhex shaqayso Xeer Illaalintu. waxaana la bixin karaa Xabsi Xalaalayn aan ka badnayn 7 Cisho Markiiba, uguna yar tahay 3 Maalmood, Laakiin waxaa la kala bixin karaa Tiro ka dhowr jeer Xabsi Xalaalaynta.
Xafiiska Xeer Illaaliyaha Guud waxa uu wada shaqayn la yeelan karaa Booliska, sida uu qabo Xeerarka Dalku, Waxayna gali karaan Dacwooyinka Dadka ay soo baaraan Boolisku, balse ma jirto meel ay Xeerarka Wadanka kaga qoran tahay in Nabadsugid qof u xiran ay Xabsi Xalaalayn laga siin karo Maxkamadaha Rayidka.
Xeerarku sidoo kale waxay si cad u diidayaan in Qof aan ku xirnayn Xabsiyadda loogu talagalay Baarista ay u aqoonsadaan Maxbuus u xiran Sifo Sharci ah oo la horgayn karo Maxkamadaha Dalka, Waxaana Qofka Eedaysanaha ee la doonayo in Maxkamad la geeyo ay tahay in lagu xiro Xarumaha loogu talagalay Baarista Dambiyadda, Iyadoona Xeryaha Ciidanka lagu xiro karo oo kaliya Askari ama Sarkaal u xiran arrimo Dhaqan Toosin Ciidan oo kaliya.
C/raxmaan C/shakuur oo ah Siyaasi Xilal kala duwan ka soo qabtay Soomaliya, ahaana Musharax u tartamay Xilka Madaxwaynanimadda Somalia Labo Xilli ayaa loo haystaa Aragtidiisa Siyaasiga ah, Waxayna taasi ka hor imaanaysaa Dastuurka Dalka oo oggolaanaya Madaxbanaanidda Ra’yiga.
Soomaaliya oo ah Dal ka soo kabanaya Burbur waxay dad badan shaki ka muujinayaan Tallaabooyinka is xig xiga ee lagu caburinayo Aragtidda Siyaasiga ah ee ka duwan tan Madaxda Qaranka inay keeni karto Fowdo iyo Dagaalo hor leh oo Dalku ka galo, iyadoona wali ay jirto Is aaminid la’aan Beelaha Soomaalida dhexdooda, taasoo hadaba laga dareemaya in Beelaha Qaarkood ay Su’aalo ka keeneen siday Dowladdu wax u wado, loona arko inay jirto bartilmaameedsi Dad Gaar ah.
Akhriso C/raxman C/shakur Oo Diiday In Damaanad Lagu Daayo, Iyadoona Dib loogu Celiyay Xabsiga NISA.